खतरामा समुद्र, जोखिममा पृथ्वी – देशसञ्चार
सोचिए भन्दा ६० प्रतिशत बढी ताप सोस्दै समुद्र
खतरामा समुद्र, जोखिममा पृथ्वी
समुद्रले सोस्दै आएको तापक्रमको मात्रा निकै कम आँकिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । पछिल्लो २५ वर्षमा समुद्रले सोसेको तापको मात्रा अहिले सोचिँदै आएको भन्दा ६० प्रतिशत बढी रहेको नयाँ अध्ययनले देखाएको हो ।
यसको अर्थ जीवाश्म इन्धनको प्रयोग वा उत्सर्जनको सन्दर्भमा पृथ्वी निकै संवेदनशिल रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापक्रम बृद्धि यो शताब्दीमा सुरक्षित स्तरमा कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनमा अन्तरदेशिय प्यानल (आइपिसिसी) का वैज्ञानिकले गरेको अध्ययन अनुसार हरितगृह ग्यासका कारण उत्पन्न भएको तापको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सामा समुद्रको पहुँच रहेको छ । तर नयाँ अध्ययन अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा हरेक वर्ष विद्युत उत्पादनका लागि १५० गुणा बढी इन्धन प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
यो यसअघि सोचिएको भन्दा ६० प्रतिशत बढी हो र निकै ठूलो चिन्ताको विषय रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन् । यसरी उत्पन्न भएको ताप जोडिँदै जाँदा पृथ्वी तातिँदै गएको छ । पछिल्लो अनुसान्धानबाट हामीले सोच्दै आएको भन्दा निकै अधिक तापक्रम समुद्रमा गइरहेको छ ।
यस्तै मानवले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण सोचे भन्दा धेरै तापक्रम उत्पादन भइरहेको पनि खुलेको छ । यसको अर्थ उही मात्राको ग्यासबाट अहिले बढी ताप निस्कन थालेको छ । अर्थात पृथ्वी कानर्बडाइअक्साइडका लागि थप संवेदनशिल बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता अनुसार तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ । समुद्री पानीको तापक्रम बढ्दै गएको छ र यसले गर्दा त्यसमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदैछ ।
यसको अर्थ समुद्री जीवका लागि जीविका कष्टकर बन्दैछ भन्ने रहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका डा. लोरी रेस्प्लान्डीले बताए ।
यस्तै तापक्रम बढ्दै जाँदा थर्मल एक्सपान्सनका कारण समुद्र सतह पनि बढ्दै जाने डा. रेस्प्लान्डीको भनाई छ । समुद्रले लिएको ताप फेरि फिर्ता आउने तर त्यसका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले खतरा झन बढी रहेको उनको भनाई छ ।